ThutaStar - Page2Of 583 - Welcome From ThuTaStar
အပျို စစ်မစစ် သိချင်တဲ့ ယောက္ခမကြောင့် မင်္ဂလာပွဲကို တဖက်သက် ဖျက်သိမ်းခဲ့တဲ့ သတို့သမီး
September 20, 2019 Thuta Star 0
အပျို စစ်မစစ် သိချင်တဲ့ ယောက္ခမကြောင့် မင်္ဂလာပွဲကို တဖက်သက် ဖျက်သိမ်းခဲ့တဲ့ သတို့သမီး ထိုင်ဝမ်က သတို့သမီးလောင်း တစ်ဦးဟာ ယောက္ခမလောင်း ဖြစ်သူက သူမကို အပျို စစ်မစစ် သိလိုတာကြောင့် မင်္ဂလာပွဲကို သူမဘက်က တစ်ဖက်သက် ဖျက်သိမ်းခဲ့ကြောင်း လူမှုကွန်ရက်မှာ ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ ဒီအဖြစ်အပျက်ဟာ လူမှုကွန်ရက် […]
လိင်ပြောင်းအမျိုးသမီးက သူမကို ယောက်ျားဘဝ တုန်းက ငြင်းခဲ့သူနဲ့ ချစ်သူတွေ ဖြစ်လာ
လိင်ပြောင်းအမျိုးသမီးက သူမကို ယောက်ျားဘဝ တုန်းက ငြင်းခဲ့သူနဲ့ ချစ်သူတွေ ဖြစ်လာ အမေရိကန်နိုင်ငံ Owensboro မြို့က Erin အမည်ရှိသူ ၂၂ နှစ် အရွယ် လိင်ပြောင်း အမျိုးသမီး က သူမ ယောက်ျား ဘဝက ချစ်ခဲ့ရသူ ၂၈ […]
လက်မထပ်ခင် ချစ်သူနဲ့ချစ်တင်းနှောခဲ့လို့ ကြိမ်ဒဏ်ပေးခံရတဲ့အမျိုးသမီး၊ မူးမေ့လဲကျသွားခဲ့
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာ တွေ့ရလေ့ရှိတဲ့ ကြိမ်ဒဏ်အပြစ်ပေးမှုမှာ လူ့အခွင့်အရေးသမားတွေက အမျိုးမျိုးဝိုင်းဝန်း ကန့်ကွက်နေကြပေမယ့် အခုအချိန်ထိ ဒီကြိမ်ဒဏ်စနစ်ကို ကျင့်သုံးနေဆဲ ပြည်နယ်တွေက ရှိနေဆဲပါ။ အများအားဖြင့်တော့ အမျိုးသမီးတွေကို လက်မထပ်ခင် ချစ်တင်းနှောတယ်ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲချက်နဲ့- ကြိမ်ဒဏ်အပြစ်ပေးလေ့ရှိပြီး၊ လောင်းကစားလုပ်ခြင်း၊ အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်ခြင်း၊ အမျိုးသမီးများ ဆွေမျိုးသားချင်း ယောက်ျားလေးမပါဘဲ အပြင်သွားခြင်း၊ အရက်သေစာသောက်စားခြင်း စတာတွေဟာ […]
စီရော်နယ်ဒို ရှာနေတဲ့ သူ့ရဲ့ကျေးဇူးရှင် အမျိုးသမီးကို ရှာတွေ့သွားပါပြီတဲ့နော်
စီရော်နယ်ဒို ရှာနေတဲ့ သူ့ရဲ့ကျေးဇူးရှင် အမျိုးသမီးကို ရှာတွေ့သွားပါပြီတဲ့နော် စီရော်နယ်ဒိုဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ သူ့ရဲ့ငယ်ဘဝပုံရိပ်တွေကို ထုတ်ပြောခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီမှာ စီရော်နယ်ဒိုက သူ့အပေါ်ကျေးဇူးရှိဖူးခဲ့တဲ့ McDonalds ဆိုင်က အမျိုးသမီးဝန်ထမ်းကို ရှာဖွေနေတဲ့ အကြောင်းကိုလည်း ပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။ စီရော်နယ်ဒိုဟာ ငယ်စဉ်တုန်းက အရမ်းဆင်းရဲချို့တဲ့သူဆိုတာ အားလုံးလည်းသိပြီးသားပါ။ ဒါကြောင့် ဘောလုံးကစားပြီးပြန်လာတိုင်း […]
မိဘတွေက နေ့စဉ်ရိုက်နှက်လို့ (၉)လွှာကနေ ခုန်ချသတ်သေခဲ့တဲ့ (၈)နှစ်အရွယ် ကောင်လေး
အသက်(၈)နှစ်သာရှိသေးတဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်ဟာ နှစ်ရှည်လများ မိဘတွေ နှိက်စက်တဲ့ဒဏ်ကို မခံနိုင်တော့တာကြောင့် (၉)လွှာတိုက်ခန်းကနေ ခုန်ချပြီး မိမိကိုယ်ကို သေကြောင်းကြံစည်ခဲ့တယ်လို့ Metro သတင်းဌာနက ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဒီသတင်းကို ApannPyay ပရိသတ်ကြီးအတွက် တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ကလေးရဲ့အမည်မှာ Anton လို့သာ ဖော်ပြထားပြီး၊ ယူကရိန်းနိုင်ငံ၊ Enerhodar မှာ နေထိုင်ပါတယ်။ […]
ရည်းစားထားတာ မင်းအပြစ်မဟုတ်ဘူး…လူရွေးမှားရင်တော့ မင်းအပြစ်ပဲ
အရွယ်ရောက်လို့.. .ရည်းစားထားတာ မင်းအပြစ်မဟုတ်ဘူး… …လူရွေးမှားရင်တော့ မင်းအပြစ်ပဲ…ဒီမှာ…ညီမလေး ကိုယ့်ကို တစ်ကယ်မချစ်တဲ့လူအတွက် ပေးဆပ်နေရတာ တန်ရဲ့လား…?ကိုယ့်ကို ဥပေက္ခာပြုထားတဲ့ လူတစ်ယောက်ကိုဆက်ချစ်နေရင်ရော…အဆင်ပြေနိုင်ပါ့မလား… ? ကိုယ့်အချစ်တွေကို တန်ဖိုးမထားတတ်တဲ့ လူတစ်ယောက်အတွက်…နာကျင်ခံစားနေရတာတွေကိုယ်ပေးသလို ပြန်ရလာနိုးနိုးနဲ့ မျော်လင့်နေရတာတွေကဖြစ်သင့်သလား သေချာစဉ်းစားပါအုံး။ညီမလေး သိထားပါ… …တစ်ကယ့်အချစ်စစ်ကကိုယ်က ပေးမှပြန်ရတာ မဟုတ်ဘူး…ကိုယ်က မပေးရင်တောင် သူ့ဘက်က ပေးချင်နေတာမျိုး… […]
အနုပညာအလုပ်ကို ဆက်ပြီးမလုပ်ဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းကိုပြောပြတဲ့ အကယ်ဒမီနန္ဒာလှိုင်
တစ်​​ခေတ်​တစ်​ခါက နာမည်​ကြီးမင်းသမီးတစ်​ဦးဖြစ်​​ခဲ့ပြီး ယ​နေ့တိုင်​ ပရိသတ်​ရင်​ထဲ​နေရာယူထားဆဲဖြစ်​တဲ့ မင်းသမီးနန္ဒာလှိုင်​က​တော့ သူအနုပညာအလုပ်ကို ဆက်ပြီးမလုပ်ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကို ဒီဗွီဒီယို​လေးထဲမှာ ​ပြောပြထားပါတယ်​။ သူမက​တော့ အိမ်​​ထောင်​ကျသွားတဲ့အချိန်​မှာ အသက်​ကလည်း ၃၀​ကျော်​ဖြစ်​သွားပြီဖြစ်​တဲ့အတွက်​ မိသားစုကိုအချိန်​​ပေးလိုက်​ခြင်းဖြစ်​​ကြောင်းနဲ့ က​လေးရလာတဲ့အချိန်​မှာ သားသမီးနဲ့ အချိန်​ပြည့်​အနီးကပ်​ရှိ​ပေးချင်​တဲ့အတွက်​ ဖြစ်​တယ်​လို့ ဆိုပါတယ်​။ ခင်​ပွန်းဖြစ်​သူကိုယ်​တိုင်​က ဝါသနာပါတဲ့အတွက်​ ဆက်​ရိုက်​ဖို့တွန်းအား​ပေး​ကြောင်းနဲ့ သူကိုယ်​တိုင်​ ပရိုဂျူဆာလုပ်​​ပေးမယ်​​ပြော​ကြောင်း အကယ်​ဒမီနန္ဒာလှိုင်​က​ပြောပြခဲ့ပါတယ်​။ […]
ရွယ်တူ သူ့မ်ိန်းမကို အသက်ကြီးပြီ ငြီးငွေ့ ပြီဆိုပြီး ကောင်မလေးငယ်ငယ် အချောစား မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့ ချိတ်မိ
အသက်၄၅ လောက် ကလေး၃ယောက်အဖေဟာ ရွယ်တူ သူ့မ်ိန်းမကို အသက်ကြီးပြီ ငြီးငွေ့ ပြီဆိုပြီး ကောင်မလေးငယ်ငယ် ရှာပါတယ် ထုံးစံအတိုင်း FB ကနေ အသက်၂၂နှစ် အချောစား မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့ ချိတ်မိပါတယ်…. အပျော်ရှာချင်ပေမဲ့ အပြစ်ပြောစရာမရှိတဲ့ ကလေးတွေ အမေ ကိုလည်း မကွဲချင်တဲ့ ဒီလူအတွက် ပိုအဆင်ပြေစေတာက […]
ဇနီးကို ဘာမှမပြောဘဲ ကွာရှင်းသွားတဲ့ခင်ပွန်းကို ရဲတပ်ဖွဲ့ ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ထား
အမျိုးသားတစ်ယောက်ဟာ ဇနီးဖြစ်သူကို ဘာအကြောင်းပြချက်မှ မပေးဘဲ ကွာရှင်းပြီး တိမ်းရှောင်နေတဲ့အတွက် ရဲစခန်းက ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဲဒီအမျိုးသားဟာ အသက်(၅၁)နှစ်ဖြစ်ပြီး၊ တက္ကဆက်မှာ နေထိုင်ပါတယ်။ နာမည်မှာ Paul Nixon လို့ သိရပါတယ်။ ဒီအကြောင်းကို UniLad က ဖော်ပြထားတာဖြစ်ပြီး ApannPyay ပရိသတ်ကြီးအတွက် ဘာသာပြန်ပေးလိုက်ပါတယ်။ […]
အိမ်ထောင်များရှိလျှက် နှင့် တည်းခိုခန်းတွင် ခိုးစားကြသော စုံတွဲ အခုတော့ တစ်လင်တစ်မယား ပုဒ်မ ၁၃ ဖြင့်အမှုဖွင့်ခံရ
အိမ်ထောင်များရှိလျှက် နှင့် တည်းခိုခန်းတွင် ခိုးစားကြသော စုံတွဲ တစ်လင်တစ်မယား ပုဒ်မ ၁၃ ဖြင့်အမှုဖွင့်ခံရ စက်တင်ဘာ(၂၀)AlinnMyay(အလင်းမြေ) တောင်ငူမြို့ ၊ ထီးလှိုင် (၁ )ရပ်ကွက် ၊ ပန်တောက်မြိုင်လမ်းနေသူ မသဲစုခိုင် (၂၃)နှစ် ၊(ဘ) ဦးသန်းထိုက်အောင် နှင့် တောင်ငူမြို့နယ် ၊ကေတုမတီမြို့သစ် ၊ […]
« 123 … 583 »